दाद र कालो पोतोले आफ्नो सुन्दर अनुहार कुरूप बनाउँदैछ ? चिन्ता नलिनुहोस अब घरमै यसरी चट्ट पार्नुहोस – Sidha Online Post
मुख्य पृष्ठ /Health/दाद र कालो पोतोले आफ्नो सुन्दर अनुहार कुरूप बनाउँदैछ ? चिन्ता नलिनुहोस अब घरमै यसरी चट्ट पार्नुहोस
तपाईंको छाला एकदमै तैलीय छ भने अन्डा र गहुँको पिठोको प्याक लगाउनुहोस् । यसले छालाको तेललाई नियन्त्रण गर्छ । हरेक रात सुत्नुअघि अनुहारमा जैतुनको तेल लगाउनुस् । यसले अनुहारलाई नरम बनाउँछ । यसले छालामा जमेको कालो दाग कम गर्न पनि मद्दत पु¥याउँछ । केरा, मौसम, अन्डाको प्याकले अनुहारमा भएका दागहरू हटाउन मद्दत गर्छ ।
गोलभेँडा, कागती र अन्डाको प्याक लगाउनाले डन्डीफोर, कालो धब्बा हट्नुका साथै छालामा चमक पनि आउँछ । गोलभेँडा, कागती र महको प्याक लगाउनाले अनुहार चम्किलो हुन्छ । घामले डढेर कालो भएको छालामा काँचो दूधले मसाज गर्दा फाइदा हुन्छ ।खैरो चिनी, कागती र नरिवलको तेल मिसाई मसाज गर्नाले सनबर्नको असर कम गर्न सकिन्छ । काँक्रोको पेस्ट, मुल्तानी माटो र रोज वाटरको प्याक बनाएर लगाउँदा अनुहारमा चमक आउँछ । एक चम्चा नुनमा आधा चम्चा खाने सोडा र एक चम्चा मह राखेर घोल्ने र त्यसले अनुहारमा मसाज गर्ने यसबाट पनि अनुहारको छालामा चमक आउँछ ।
महिलाले प्याड किन्दा ध्यान दिनुपर्ने यी ५ कुरा
क्यान्सर सुगर र मुटु रोग देखि ब्लड सुगर कम गर्ने खानुहोस् पोलेको मकै, यस्ता छन् अन्य फाइदा